China, Kurume 4, 2021 China, Gunyana 30, 2021 Douglas Karr
simba - nekubvunzurudza vatungamiriri muindastiri yangu, ndaida kuti zita rangu rizivikanwe. Ichokwadi chakashanda uye chakatungamira kumimwe mikana isingadaviriki - sekubatsira kumisidzana-inomiririra Dell's Luminaries podcast iyo yakazoguma iri pamusoro pe1% yevanonyanya kuteerera podcast panguva yayo yekumhanya.
izwi - Sezvo podcast yangu payakakura, zvakandipa mukana wekugovana tarisiro nevamwe vatungamiriri muindastiri yangu vaive nehunyanzvi uye vari kuwedzera asi vasingazivikanwe. Ini handinyari kuti ini ndoda kuita iyo podcast iwedzere kubatanidza uye dzakasiyana kuvandudza kuoneka kwayo uye kusvika.
Kuedza - iko kuedza kutsvagisa, kugadzira, kutsikisa, uye kukurudzira zvirimo zvinotora nguva yakareba kupfuura kuita bvunzurudzo. Saka iyo-yemaminetsi makumi maviri-podcast inogona kutora matatu kusvika mana maawa enguva yangu kuigadzirira uye kuiburitsa. Iyo inguva yakaoma nguva yangu uye yaita kuti zvindiomere kuramba ndichikurumidza.
Kuronga - Ini ndinotenda ndinogona kuwedzera kusvika kwangu dai ndaive nechinangwa mudhaidhi yepodcast yangu futi. Ini ndingafarire kugadzira yemukati khalendari kuitira kuti, mukati megore rose, nditaure pane yakatarwa nhaurwa. Fungidzira Ndira Gumiguru uri e-commerce mwedzi zvekuti nyanzvi dzaigadzirira mwaka unouya!